DHALINYARO RAALIGELIN KABIXISAY XAALAD AY WADEEN DAD QURBAHA KUSOO WAREERAY.by farah M | Gabiley News Online
DHALINYARO RAALIGELIN KABIXISAY XAALAD AY WADEEN DAD QURBAHA KUSOO WAREERAY.by farah M
February 7, 2019 - Written by maxamed jeex
quwad xoogle ninkii sheegta,ee quruxna moodaaya,qolo qolo ninki faanayee,duulal kala qaybsha,mar unbuu ka qaylshaa,ninyahow qaabka uu yahaye,qabyaalada ninki doonayoow,qurun xun weeyaane.
Sida aad ka daawateen shaashadaha qarkood waxa si qarsoodiya la iskugu keenay dhalinyaro lagusoo kexeeyey in dhar loo qaybinayo ayaa waxa la sheegay insharkaa ay ku qornaayeen erayo aan sifiican loo muujin.
oo ka hadlaya in ay SNM xasuuqday dad reer borama ah,taasoo dadka qaarkii ku noqotay jahwareer ay isweydiiyeen halka ay kayimaadeen dadka maanta dhalinyarada maanta uga sheekaynaya inuu xasuuq shacay.
Arintan oo dadku ufahmeen in aanay arintani caqliyad kusalaysnayn xasuusta dadka hawshan wadaana aanay caadi ahayn balse waxaa la isku raacay inay soo abaabuleen dad qurbaha kumaqnaa 30sano inkabadan oo usoo noqday dhaxalkii waalidiintoodu kategeen inay kudacwoodaan oo la sheegay inay dibada kagasoo noqdeen oo nool loosoo ururiyey.
Sidaasi darteed waxaan leenahay looma baahno hadalo uqdadeysan oo dadka wada dega dhulka somaliland maaha in la iska horkeeno.
Sidaasi awgeed Waxaan ka codsaneynaa madaxweyne muuse biixi iyo badhasaabka gobolka awdal waa inaad dajisaan arimaha degaanka siina deysaan dhalinyaradaa qurba joogtu marin habaabisey.
Dhalin yaradana waxaan kula talinayaa waa inaad aamintaan dalkiina dalkiina somaliland oo aad ogaataan inaan wax wada leenahay marnaba ma kala maarmaan borama,hargeisa,laascaanood iyo ceerigaabo.